အဖြန္​ကကကက — Steemit
အခွန်ကောက်ခဲ့ပြီးသော) အစားအသောက်အဖျော်ယမကာများစားသုံးမှုအတွက်ကျဆင်းမှုခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစာရင်းအင်းသိသာဘူး။ "သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာတစ်ခုမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကြီးထွားလာအသိအမှတ်ပြုမှုရှိတယ်, နဲ့သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာသူတို့ပါပြီသကဲ့သို့စျေးပေါမဟုတ်လျှင်စားသုံးသူကိုအခြားအဖျော်ယမကာကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်
အဖျော်ယမကာအခွန်အမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ, မရှိတုန်းပဲအချို့သောအဘို့ကိုသိရန်စောလွန်းရဲ့ငြင်းခုန်။ Philadelphia တွင်, ထိုအခွန်အခများသည်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များ
?(; ကန်ဒန်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ဝီလ်မင်တန်, ဝဲ Trenton, နယူးဂျာစီ) တွင်နေထိုင်နေနှင့်ပတ်သက်ပြီး 900 လူတွေကိုမေးတယ်။ Philadelphia တွင်နေထိုင်သူများအခွန်လွန်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ sugary ဆိုဒါမသောက်အစီရင်ခံရန် 40% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ ရှိ. , စွမ်းအင်ဖြည့်အချိုရည်သောက် 64% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ။ အဲဒီအစား, သူတို့ကပိုရေသောက်သလိုပဲ; ဒေသခံများကနေ့တိုင်းပုလင်းရေသောက် 58% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အဆိုပါသုတေသီများလင်မနစ်သို့မဟုတ် cranberry သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့ sugary အသီးအချိုရည်များတွင်ကျဆင်းမှုကိုမမွငျခဲ့သညျ။
" လေ့လာမှု Co-စာရေးဆရာမေီ Auchincloss တစ်ခုတွဲဖက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Drexel ရဲ့ Dornsife School မှာ။ နောက်ထပ်: Soda အခွန်တကယ်တော့အလုပ်သလား? တချို့ကကျွမ်းကျင်သူများကြောင့်
အတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာလွန်မခံခဲ့ရပေမယ့်မြို့ရဲ့ Pre-သူငယ်တန်း programming ကိုတစ်ခုတိုးချဲ့တူသောရန်ပုံငွေအမှုအရာအားကူညီနိုင်ရန်မြို့အဘို့ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့။ သို့သော်အချို့သောအစပျိုးအလားအလာရလဒ်များကိုဖေါ်ပြခြင်းနေကြသည်။ ဘာကလေ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, သုတေသနသကြား-ဒူအဖျော်ယမကာအပေါ်တစ်ဦးအခွန်သွား 2015 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ကမြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်တစ်နှစ် Berkeley ရှိသကြား-ဒူအချိုရည်၏ရောင်းအားနီးကပ်မှ 10% ကျဆင်းသွားပြနဲ့ရေရောင်းအား 16% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလားတူပေါက်မက္ကစီကိုအစီရင်ခံခံပြီ တိုင်းပြည် 2014 ခုနှစ်